वामगठबन्धन र फोरमबीच आज पनि छलफल हुने, के सहमति होला ? | Ekhabaronline.com
वामगठबन्धन र फोरमबीच आज पनि छलफल हुने, के सहमति होला ?
| प्रकाशित मितिः बिहिबार, फाल्गुन १७, २०७४ 8:59:48 AM | 45 पटक पढिएको |
संविधान संशोधन र सरकारमा सहभागिता लगायतका विषयमा वामगठबन्धन र संघीय समाजवादी फोरमबीच भइरहेको छलफल सकरात्मक भनिए पनि परिणाम निस्कन सकेको छैन । बुधबार गठबन्धन र फोरमबीच लिखित सहमतिको तयारी भए पनि छलफल निश्कर्षमा पुग्न सकेन । बुधबार साँझ भएको गठबन्धन र फोरमबीचको बैठक सकरात्मक भनिए पनि बैठक निश्कर्षविहीन भयो ।
तर, नेताहरुले बिहीबार पुनः छलफल गरेर निश्कर्षमा पुग्ने बताएका थिए । फोरमलाई सरकारमा सहभागी गराउन पछिल्ला केही दिनयता दैनिक गृहकार्य भइरहेको छ । तर, द्धिपक्षीय बैठकले कुनै ठोस सहमति जुटाउन सकेको छैन । गठबन्धन र फोरमबीच लिखित सहमति नै हुने तयारी छ ।
छलफलको निरन्तरता स्वरुप बिहीबार बिहान ९ बजे पुनः बैठक बस्दैछ । बिहीबारको बैठकबाट ठोस निश्कर्ष निस्कने बैठकमा सहभागी नेताहरुले बताएका छन् ।
यस्ता छन् मस्यौदाका विषय
गठबन्धन र फोरमबीच मुख्य चार विषयमा छलफल जारी छ । संविधान संशोधन, सरकारमा सहभागिता र यसअघिका राजनीतिक सहमति मुख्य विषय छन् ।
फोरमले संविधानको धारा २७४९४० तथा ९७० सँग सम्वन्धित विषयलाई मुख्य एजेण्डाका रुपमा पेश गरेको छ । जसमा संघीय प्रदेशको सीमा हेरफेरका लागि प्रदेशको स्वीकृति लिनुपर्ने विषय समेटिएको छ । हालको प्रावधानले प्रदेशको सीमा हेरफेर सम्भव नभएको भन्दै उक्त प्रावधान संशोधन हुनुपर्ने फोरमको माग छ ।
कार्यदलस्तरमा संविधान संशोधन आपसी समझदारी र आवश्यकताका आधारमा हुने भन्ने शव्दावलीसहित मस्यौदा तयार भएको छ । साही सेरोफेरोमा छलफल जारी छ ।
फोरमले संशोधनसँगै संघीय सीमा आयोग गठनलाई पनि शर्त बनाएको छ । प्रदेशको सीमाङ्कनका विषयमा सुझाव दिन आयोग गठन गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । दुई दलबीच भएको छलफल अनुसार संशोधन र आयोगको विषयमा सहमति भए फोरम सरकारमा जानेछ । फोरमसँगै प्रदेश २ मा वाम गठबन्धनको पनि प्रतिनिधित्व सरकारमा हुनेछ ।
फोरमले यसअघि ०६४ मा तत्कालीन सरकारसँग भएको २२ बुँदे सहमति कार्यान्वयन रहेको छ । फोरमले केन्द्रीय सरकारमा तीन मन्त्रालय माग गरेको छ । परराष्ट्रसहित थप एक मन्त्रालय फोरमलाई दिनेमा भने वाम गठबन्धन सकरात्मक रहेको छ ।